Abakhiqizi Bensimbi Yensimbi Yensimbi - Abaphakeli Bensimbi Base-China Abaphakeli Nefektri
sakaza amaphampu wesandla sensimbi
Ama-Pump Iron Hand Hand Okwamanje, amaphampu amaningi asebenzisa ukwakheka kweplunger ephindwe kabili, okukhipha ingcindezi ephansi kanye nokukhipha umfutho ophakeme, kepha lapho ipompo lengcindezi likukhipha kwengcindezi enkulu, ukugeleza kuncane kakhulu futhi ukusebenza kahle komsebenzi kuphansi. Ukuthatha ipompo lesandla semayini njengesibonelo, imingcele ethile imi kanjena: ingcindezi elinganisiwe (umfutho ophakeme) ama-63 MPa; ukulinganiswa kokukhipha okulinganiselwe 1.5 ml / isikhathi; ingcindezi yokukhipha ingcindezi ephansi 5-10 MPa; ukugeleza kokucabanga okuphansi kwengcindezi 12 ml / isikhathi; umfutholuketshezi ethangini ...
Sakaza Iron Hand Pumps
Sakaza Iron Garden Pumps
I-Cast Iron Garden Pumps Application 1. Umthombo wamandla wentambo yokuqinisa nokuqinisa idivayisi. Ingcindezi yokusebenza kawoyela wokubacindezela ingafinyelela ku-300mpa. Njengamanje, amalahle aseChina, amandla kagesi, imboni yamakhemikhali nezinye izimboni zisebenzisa amantongomane wokubacindezela noma ama-stretcher wokubacindezela, anempompo yesifiso sasebusuku esinamandla kakhulu njengomthombo wamandla, othole imiphumela emihle. 2. imishini Mechanical Isigaxa bushelelezi noma cylindrical ebusweni ukuphazamiseka kufanelekile ukuqaqa p ...
sakaza insimbi ingadi amaphampu isandla
inkomishi yensimbi yensimbi yamaphampu wesandla Isicelo 1. Umthombo wamandla wentambo yokuqinisa nokuqinisa idivayisi. Ingcindezi yokusebenza kawoyela wokubacindezela ingafinyelela ku-300mpa. Njengamanje, amalahle aseChina, amandla kagesi, imboni yamakhemikhali nezinye izimboni zisebenzisa amantongomane wokubacindezela noma ama-stretcher wokubacindezela, anempompo yesifiso sasebusuku esinamandla kakhulu njengomthombo wamandla, othole imiphumela emihle. 2. Isisetshenziswa semishini Isigaxa ebushelelezi noma indawo yokuphazanyiswa komhlaba eyi-cylindrical kufanelekile ...
I-Cast Iron Hand Pumps Manual futha kawoyela ye-hydraulic uhlobo lwepompo encane kawoyela ephezulu engaguqula amandla wamandla amandla abe amandla wokubacindezela. Ingakwazi ukwenza imisebenzi ehlukahlukene njengokuphakamisa, ukugoba, ukuqondisa, ukugunda, ukuqabula, ukuhlanganisa, ukuqaqa nokwakhiwa kwezakhiwo nokwakhiwa kwamasosha, njll.Izimpawu zempompo kawoyela ye-hydraulic: ingcindezi ephezulu, imanuwali, incane kakhulu, kulula ukuyiphatha, kulula ukusebenza, anhlobonhlobo kwezicelo. Ukusebenza kwejubane kabili, i-aut ...